शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि के सोच्छन् पुरुष ? | शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि के सोच्छन् पुरुष ? – हिपमत
काठमाडौं,२१ माघ:एउटा सम्बन्ध जोगाउनको लागि जति एक अर्काबीच प्रेम जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ एक अर्कासँग नीजि पल विताउनु । त्यसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि सामान्य नै मानिन्छ । जसले सम्बन्धमा थप मिठास ल्याउँछ ।